hand push paddy Weeder Manual umshini osetshenziselwa ukhula uyathengiswa
E-paddy irayisi ekhula ,Ukulawula ukhula isinyathelo esibalulekile sokuvikela ukulahleka kwezindleko zokukhiqiza nezokukhiqiza, kanye nokugcina ikhwalithi yokusanhlamvu enhle. Ukulawulwa okuqondile kokhula kungenziwa ngokusebenzisa ukhula ngesandla, Ukhula ngomshini kusetshenziswa izinsimbi ezinjengokhula ngesandla i-weeder nokutshala ukhula kolayini.
Le hander paddy weeder ilungele ukhula lwensimu.Ukusetshenziswa kwe-herbicide, kunganciphisa ukungcoliswa kwemvelo futhi ivikele ukungasebenzi kwenhlabathi. Umshini osetshenziselwa ukhula ngomshini wemishini,lincane ngosayizi, ukukhanya kwesisindo, kulula ukuhamba ,okuyinto ezomnotho futhi ezisebenzayo ukulima.
Izici zesandla se-paddy weeder
1.Lo mshini weeder weeder ungasebenza kukhula ensimini ye-pad paddy.
2.Ukhula olusezingeni eliphezulu, alungele amathafa, amagquma, amathala, unxantathu neminye imikhakha yodaka enamadijithi amancane.
3.Umshini weeder weeder ngosayizi omncane nosayizi olula,Kulula ukusebenza nokunakekela,Kulula ukuhambisa futhi kuyonga futhi kuyasebenza.
4.Ibala lokukhula ligxile futhi lijulile, i-angle iyakwazi ukuguquguquka, kunengqondo, futhi umkhawulo omkhulu uhambelana nokusetshenziswa kwamandla.
5.Umshini ungenza ukhula lomugqa futhi ungalimi emasimini. Ukulondolozwa kwabasebenzi kakhulu kunokhula lwendabuko, cindezela ukuze uhambe ungagxili izinhlungu.Ngisho ukuthi umshini wokususa ukhula ulula, iqukethe amasu amaningi.
6.Kube amathuluzi adingekayo wokutshala ilayisi.
Umshini wezinsimbi wezobuchwepheshe obusetshenzisiwe weeding
Ukusebenza kobubanzi 15cm
Ukusebenza ngokujula 12~ 20cm
Ububanzi bokubamba 45cm
Usayizi womshini 1.87*0.45*1.1m
Isisindo somshini 6kgs